musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Brand Africa
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Cote d'Ivoire Kupwanya Nhau • tsika nemagariro • nhau • vanhu • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Africa inoziva nhasi kuti yayo Brand Africa chinhu chinodiwa. CAF Mutumbi weUNWTO izvozvi uri pasi peMutungamiri weKenya Gurukota reNajib Balala, Gurukota rezveKushanya kuKenya rine basa rekufambisa chirongwa ichi kumberi.
Ino inguva yekunyorazve rondedzero yeBrand Africa sePMAESA, iyo (Ports Management Association yeEastern neSouthern Africa) uye yavo "Cruise Africa" ​​drive iri kuunganidza nhanho pamwe nechikumbiro cheCruise Ship Ports kubva kumatunhu ese eAfrica kuti vabatane se imwe yekumisa Africa senzira yakasarudzika yengarava.
Uku kufambisa kunoonekwa semuenzaniso we Africa iri kukokwa kuti ishande pamwechete kuti ikure keke ye Africa. "Ndiyo nyaya yekuwana runhare zvakanaka uye kugona kufunga zvakakura" akadaro Alain St. Ange in Chengdu China panguva yemusangano wake neVatariri Vezvekushanya vakasiyana venyika ino.
Gurukota Siandou Fofana weCote D'Ivoire anoda bhizinesi rezvikepe uye parutivi rweUNWTO General Assembly kuChengdu China akasanganawo naAlain St. Angese, aimbova Gurukota reSychelles rekushanya, Civil Aviation, Ports neMarine iye zvino achitungamira yake chaiyo Saint Ange Consultancy.
Musangano muChengdu wakabatsirwawo naLaetitia Mockey, weCote D'Ivoire technical Advisor anoona nezve Kubatana uye Kudyidzana ku Ministry of Tourism uye Isabelle Anoh Director wavo weKutaurirana.
"Tinofanira kukura indasitiri yedu yekushanya uye tinoda mugove mukuru weEuropean Tourism Market" Gurukota rezveKushanya reCote D'Ivoire rakati richikurukura naAlain St. Ange pamusoro pezvinhu zvine chekuita nekuonekwa, kushambadzira, kudzidziswa, kuiswa kwehotera uye kupatsanurwa , bhizinesi rekusimudzira ngarava uye super yacht marina pakati pevamwe.
Cote D'Ivoire inozivikanwa kuve inonyanya kugadzira Cacao uye zvakare mugadziri mukuru wekofi, nenzungu pakati pezvimwe zvakawanda zvinogadzirwa. Asi zvakare vane akawanda akasarudzika ekutengesa mapoinzi, izvo zvinofanirwa kuvaita nzvimbo huru yekushanya kukondinendi ye Africa, uye vanoti ivo vakagadzirira kutanga rwendo urwu.
"Big Game Fishing yakanaka neCote D'Ivoire yakabata marekodhi aMarlin" Gurukota rakati vachironga danho rekuisa Cote D'Ivoire zvakasimba pamepu yekushanya ye Africa.
Alain St. Ange weSaint Ange Consultancy ari kuronga chokwadi chekutsvaga kushanyira Abidjan uko kumwe kukurukurirana kwekubatana kuchaitika